कसले खोज्ने चौधरीको एक खर्बको स्रोत ? – खोज केन्द्र
» अर्थ » खोज रिपोर्ट » प्रदेश » राजनीति » शिक्षा/कला » समाचार » समाज » सूचना/प्रविधि अंक: 3939
यस्तो महामारीको समयमा पनि चौधरीले केन्याका महँगा होटल किन किनेका होलान् ? समाचारअनुसार– ‘केन्या सरकारले कोरोना महामारीबाट पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि दुई अर्ब केन्याली शिलिङ्गको राहत प्याकेजको घोषणा गरिदियो । उता राजकुमार पनि अप्ठेरोमा परेकाले होटल सस्तोमा बेच्न तयार भए ।
कोभिड महामारीको नाममा होटलका अधिकांश कर्मचारी हटाइएको,सस्तोमा पाइएको र सरकारी राहत राम्रै भएकाले हालको अवस्थालाई उनले सुनौलो अवसर ठानेका हुन् ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रासम्बन्धी धेरैवटा व्यवस्थालाई सँधै धोती लाउँदै र धज्जी उडाउँदै उनले निर्वाध विदेशी मुद्राको अपचलन पनि गरिरहेकै छन् ।
नबिल बैंकमा उनले आफ्नो र बंगलादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनलको नाममा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।
एनबी इन्टरनेशनलको आवरणमा प्राप्त हुने वार्षिक दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको लाभांश वापतको विदेशी मुद्रा उनले सँधै ढाका हुँदै अन्यत्र लैजाने गरेको बताइन्छ । तर, विश्वमै धनी कहलिएका व्यवसायीले अन्यत्रबाट कमाएको नाफा वा विदेशी लगानी कहिल्यै नेपाल ल्याउने गरेका छै्नन् ।
उद्योग वाणिज्य परिसंघको आवरणमा आफू अनुकूलको नीति र राहत ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध होइन,थर्काउँछन् । अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरकारी संयन्त्र उनको अगाडि मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् ।
कोरोना महामारीबारे अर्ति, उपदेश दिँदै हिँडेका डलर अर्बपतिले प्रधानमन्त्री कोभिड कोषमा भने हालसम्म एक कौडी पनि योगदान गरेका छैनन् ।